ကျွန်တော်သိသမျှ Windows Registry အကြောင်း ~ (IT) ကိုထိုက်
ကျွန်တော်သိသမျှ Windows Registry အကြောင်း
ကျွန်တော်သိသမျှကို ပြန်လည် ရှင်းပြပေးတာပါ။ ကျွန်တော့် ထက်ပိုသိတဲ့သူတွေ လည်းအများကြီးရှိတာမို့ ၀င်ရောက်ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးပေးကြပါ............... .
Windows Registry အကြောင်းကို အပိုင်း သုံးပိုင်းခွဲပြီး ရှင်းပြပါမယ်။
Chapter(1) - Windows Registry အကြောင်း
Chapter(2) - Windows Registry ကို manual ပြုပြင်ခြင်း
Chapter(3) - Windows Registry ကို Script များရေးပြီး ပြုပြင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Windows Registry အကြောင်း
Windows O.S ရဲ့ Registry ဆိုတာ O.S နဲ့ စက်ရဲ့ Application, Hardware, Software, Device Driver & Network Portocol တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် အစုအဝေးပါ။
Registry ထဲမှာ အဓိက ပါဝင်မှုတွေကတော့-Device & Application များရဲ့ Setup Progarm များ
-User Profile များ
-NTLDR (Windows ကို load ပေးတဲ့ Progarm)
Registry ကို တည်ဆောက်ပုံ နှစ်မျိုး ခွဲနိုင်တယ်။
(1) Logical Organization
(2) Physical Organization
သူ့မှာတော့ Branch (5) ခုရှိတယ်။ အဲ့ဒီ ငါးခုကို High level key(or) Sub key(or) Main key
လို့ ခေါ်တယ်။ သူ့ အောက်မှာလည်း နောက်ထပ် Sub key တွေ ရှိပြီးတော့ အောက်ဆုံးအဆင့် မှာ
Value တွေရှိတယ်။ Value တွေမှာလည်း Value name တွေ ရှိပြီးတော့ Assign လုပ်ထားတဲ့ Data
& Data Type တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီ High level key(or) Sub key(or) Main key တွေ ကတော့-
- လက်ရှိ logon ၀င်ရောက်နေတဲ့ user နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်တွေကိုဖော်ပြပေးတယ်။
- လက်ရှိ User ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းထားပေးတယ်။
- Software နှင့် ၄င်း Software တွေ မည်သို့ ဖွဲ့စည်းထားသည်ကိုဖော်ပြပေးတယ်။
- -HKEY_LOCAL_MACHINE ၏ Sub key တစ်ခုဖြစ်တယ်။
- လက်ရှိ Active ဖြစ်နေတဲ့ Hardware Configuration ကို ဖော်ပြပေးတယ်။
- ၄င်းသည် -HKEY_LOCAL_MACHINE ၏ Sub key နှစ်ခုဖြစ်သော Software & System မှ
Data များကို ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြပေးတယ်။
- လက်ရှိ Logon ၀င်ရောက်နေသော User ရဲ့ ID & Logon Screeen ကို တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပြတယ်။
- User အားလုံးရဲ့ Profile တွေကို သိမ်းပေးတယ်။
- -HKEY_CURRENT_USER သည် -HKEY_USERS ၏ Sub key တစ်ခုဖြစ်သည်။
- O.S စတင်တက်ရန် လိုအပ်သော Device များ၊ Device Driver များနဲ့သက်ဆိုင်သော Dataများအပါ အ၀င် ကွန်ပျူတာနဲ့သက်ဆိုင်သော Data Configuration များကိုပြပေးတယ်။
- မတူညီသော User များ Logon ၀င်ရောက်နေစဉ်တွင် ၄င်း ရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပြောင်းမပေးပါ။
(အထက်ပါ Sub Key ငါးခုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Registry မှာ အဓိက Sub key က နှစ်ခုပဲရှိတာကို
မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ -HKEY_USERS အောက်မှာ -HKEY_CURRENT_USER , -HKEY_LOCAL_MACHINE
အောက်မှာ -HKEY_CURRENT_CONFIG & -HKEY_CLASSES_ROOT ရှိနေပါတယ်။)
Registry ကို Hive လို့ခေါ်တဲ့ ဖိုင် ငါး ခုထဲမှာ သိမ်းထားတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့
SOFTWARE [-HKEY_CLASSES_ROOT] , [-HKEY_CURRENT_CONFIG]
လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ Logical အပိုင်းကိုပဲ အသုံးပြုပြီးတော့Physical ပိုင်းကိုတော့ နားလည်ယုံဆို အဆင်ပြေပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ Registry ကိုသိပြီ။ နားလည်ပြီ....... သူ့ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ ဆိုရင်
Start Menu> Run ကိုသွားပါ၊ နောက်ပြီး Run dialog box ပေါ်လာရင် regedit လို့ ရိုက်ပြီးEnter ခေါက်လိုက်ရင် Registry Editor ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Registery ကို ဘယ်မှာသိမ်းသလဲ ဆိုတော့..............
partation C: ရဲ့ Win32 ထဲက Config ထဲမှာသိမ်းပါတယ်။Registry ရဲ့ Repair ကိုတော့ C အောက်က Window ထဲက repair ထဲမှာသိမ်းပါတယ်။အထက်မှာ ပြောပြထားသလို Value တစ်ခုမှာရှိတဲ့ Data တစ်ခု ကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ Data typeအမျိုးအစား (၆)မျိုးအနက်က တစ်ခုခုနဲ့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ (၆) မျိုးကတော့ ...........
Raw Binary Data, Hardware သတင်းတွေကို ကွန်ပျူတာမှ binary အဖြစ်သိမ်းပေမယ့်၊Registery editor မှာ အကျဉ်းခြုံးရန် Hexa Decimal နဲ့ပြပေးတယ်။
4 byte အရှည်ရှိတဲ့ ကိန်းဂဏန်းနဲ့သိမ်း၊ Device Driver များ၊ Service နှင့်သက်ဆိုင်သောကန့်သတ်ချက် (parameter) များကိုဖော်ပြပေးတယ်။
multiple type, user များသိနိုင်သော Char နှင့်ဂဏန်းများရောနှောပုံ၊ နေရာလွတ် ၊ ကော်မာနဲ့အခြား အမှတ်တွေပါ။
Hardware တစ်ခုကို (Dirver တစ်ခု) Resource List ကိုသိမ်းဆည်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောNested Array တစ်ခု။
(အသုံးများတဲ့ data type တွေကို အနီနဲ့ ပြထားပေးပါတယ်။)
Registry Backup လုပ်ခြင်း
Windows Registry ကို backup ပြုလုပ်ခြင်း (ဒါက Chapter(1) နဲ့ Chapter (2) ကြားက ကြော်ငြာ ကဏ္ဍ)
ဒီအပိုင်းမှာကတော့ Registry ကို ပြုပြင်တာတွေ ဖြစ်လို့ ပထမဦးစွာအနေနဲ့ Windows ရဲ့ Registry ကိုBackup လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်။ Registry ဟာ Windows ရဲ့ ဦးနှောက် ဖြစ်တာကြောင့် တစ်စုံတစ်ခု ပျက်စီးချို့ယွင်း သွား ခဲ့ရင် Windows မတက်တဲ့ အထိ ပြသနာရှာတတ်ပါတယ်။
ကဲ အခု Windows မှာ အသင့်ပါလာတဲ့ Backup or Restore Wizard ကို အသုံးပြုပြီး Registry ကို backup& restore လုပ်ရအောင်..............
Start Menu> Run (Run ထဲမှာ ntbackup လို့ရိုက်ထည့်ပေးပါ)
Backup & Restore Wizard Dialogbox ကျလာပါလိမ့်မယ်...... အဲ့ဒီ Welcome Page ပေါ်မှာ ရှိတဲ့
Advance Mode ဆိုတဲ့ အပြာရောင် စာသားကို နှိပ်လိုက်ရင် Backup Utility Box ထပ်ကျလာပါမယ်။
အဲ့ဒီအထဲကမှ Backup Tab ကိုရွေးလိုက်ပြီးရင် ဘယ်ဘက် ခြမ်းရှိ My Computer အောက်က System
State Checkbox ကို အမှန်ခြစ်ကလေး ခြစ်ပြီး အောက်ဆုံးက Backup Media or File Name box မှာ
Backup လုပ်မယ့် ဖိုင်ကို သိမ်းမယ့် နေရာနဲ့ ဖိုင် အမည်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် Browse ကိုနှိပ်ပါ။ Save as Dialog
box ကျလာတဲ့အခါ Backup ဖိုင်ကို မိမိ သိမ်းလိုတဲ့ နေရာ(Folder) ကို ရွေး၊ အမည်ပေးပြီးတော့ Save လုပ်ပါ။
နောက်ပြီးတော့ Start Backup ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်ရင် Backup Job Information Dialogbox ကျလာပြီး
Start Backup ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Backup လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ "The Backup is complete"ဆိုတဲ့စာသားပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Progress Box ကိုပိတ်ဖို့အတွက် Close ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Backup UtilityBox ကို ထပ်ပိတ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Registry တစ်ခုလုံးကို Backup လုပ်တဲ့ အဆင့်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Registry ကို ပြုပြင်တာ(လက်ဆော့တာ)ပြီးဆုံးသွားလို့ နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Backupလုပ်ထားတဲ့ File ကို ပြန်ပြီး Restore လုပ်ပေးရပါတယ်။ Restore လုပ်ချင်ရင်တော့ ခဏက Backupလုပ် ထား တဲ့ file ကို double click နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Backup & Restore Wizard Dialogboxကျလာပါလိမ့်မယ်...... အဲ့ဒီ Welcome Page ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Advance Mode ဆိုတဲ့ အပြာရောင် စာသားကိုနှိပ်လိုက်ရင် Backup Utility Box ထပ်ကျလာပါမယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ Restore and Menage Media Tabကိုရွေးလိုက်ပါ။ ညာဖက်မှာ file ကိုဖြန့်ချထားပြီး System State ကို အမှန်ခြစ်ထားတာ တွေ့ရမှာပါ။
Backupဖိုင်ကို မူလနေရာမှာပဲ ပြန်ပြီး Restore လုပ်မှာမို့လို့ Start Restore ကိုနှိပ်ပေးပါ။ မူလရှိပြီးသားကို ဖျက်ပြီးရေးမယ်လို့ သတိပေးတဲ့ Warning Box ကျလာမှာဖြစ်ပြီး OK ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Confirm Boxကျလာ မှာဖြစ် ပါတယ်။
(တော်တော် အမေးအမြန်းထူတယ်နော်.............) Ok ကိုပဲထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။
Restore Progress Box ထပ်ကျလာပြီး Restore လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ "The restore is complete"ဆိုတဲ့စာတန်းပေါ်လာ ရင် close ကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ။ တစ်ချို့ setting တွေဟာ restart ချမှ ပြည့်စုံမှာမို့လို့Restart ချမလားလို့မေးတဲ့ dialog box ကျလာ ပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ Yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။Windows Restart ကျသွားပြီးတော့ နဂိုမူလအတိုင်း (မပြင်ဆင်ချိန်က အခြေအနေမျိုး)ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။
အခြားအခြားသော Registery Software တွေအသုံးပြုပြီး Backup & Restroe လုပ်လို့လည်းရပါတယ်။
ဥပမာ- CCleaner, Power, Blue စသည်ဖြင့်ပေါ့...
Hask ဆိုတာ ဘာလဲ
Gmail Hack ချင် သူများအတွက်
ဟက်ကင်နဲ. ပတ်သတ်လို. ဖတ်ကိုဖတ်သင်.တဲ.စာအုပ် ပါ
ံHacker တွေ ဘယ်က စကြ မလဲ
အလွယ်တကူ ရေးနိုင် တဲ. virus ပါ
Largest Collection Of Google Dork For SQL Injectio...
Website တစ်ခုရဲ.Admin Page ကိုရှာဖွေခြင်းးးးးး
ကိုယ်ပိုင် Trojan virus လုပ်ပြီး တိုတ်ခိုက်ချင်းသူ...
ဘလော့မှာ Back To Top button လေးထည့်မယ်..
နာမည်မသိသော virus များ စက်ထဲမှာ မ Run နိုင်အောင် ပ...
Hard Disk Space များများရရှိပြီး ကွန်ပြူတာမြန်ဆန်ေ...
C++ ဖြင့် Antivirus codeရေးနည်း
C++ Virus Guide-2
C++ compiler လုပ်နည်း